WINDOWS 10 ကိုများအတွက် MICROSOFT က EDGE BROWSER ကို - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကိုများအတွက် Microsoft က Edge Browser ကို
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge - အသစ်တစ်ခုကို browser, Window 10 အတွက်မိတ်ဆက်ကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်ကတိပေးထားဘာလို့လဲဆိုတော့အများကြီးအသုံးပြုသူများအများ၏စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်စေတဲ့ (အချို့စမ်းသပ်မှုအရသိရသည်ဤကိစ္စတွင်အတွက် - Google Chrome နှင့် Mozilla Firefox ကိုထက်ပိုမိုမြင့်မား), အဆင့်မြင့်ကွန်ယက်ကိုနည်းပညာများနှင့်စုံစုံ interface ကိုထောက်ခံကြောင်း (ဒီအမှု၌, စနစ်ထိန်းသိမ်းထားနှင့် Internet Explorer,) မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့တူညီဖြစ်နေဆဲ, ကြည့်ရှုပါ။ Windows 10 ကိုအင်တာနက် Explorer ကိုဖြစ်ပါတယ်
ဤဆောင်းပါးသည် - မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge features တွေ, အသုံးပြုသူမှအကျိုးစီးပွားဖြစ်ရသော (သြဂုတ်လ 2016 မှာစတင်မိတ်ဆက်ရှိသူများအပါအဝင်) က၎င်း၏အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များ, သစ်ကို browser ၏ setting များ, နှင့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သုံးစွဲဖို့သွားကြဖို့ကူညီပေးပါမည်သောအခြားအမှုအရာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ ကအကဲဖြတ်ရန်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ငါမသွားဘူး: အဖြစ်အများဆုံးနဲ့အခြားလူကြိုက်များ browser များ, အခြို့အဘို့အခြားသူတွေအဘို့, လိုအပ်မယ့်အဘယ်အရာကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ - သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Microsoft Edge က default အပေါ်တစ်ဦးကို Google Search ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုဆောင်းပါးအဆုံးမှာ။ ငါက Windows 10 ရှိတဲ့ default browser ကိုပြောင်းလဲပစ်ကြဘူးဘယ်လို Microsoft က Edge settings ကို Reset လုပ်နည်း, စာညှပ်များမိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge တင်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို, Microsoft Edge ဖို့ shortcut တခုကိုဖန်တီးနည်း, Edge အတွက် folder ကို downloads, ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို, Window များအတွက်အကောင်းဆုံး browser ကိုဒါ့အပြင်။ ကြည့်ရှုပါနှင့်ပို့ကုန်။
Windows ကို Microsoft က Edge ဗားရှင်း 10 1607 ခုနှစ်နယူးအင်္ဂါရပ်များ
မိုက်ကရိုဆော့ဖမှာ Windows က 10 နှစ်မြောက် Update ကိုသြဂုတ်လ 2, 2016, များလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူဤဆောင်းပါး၌နောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအပြင်နှစ်ခုအရေးကြီးသောနှင့်လူကြိုက်များအသုံးပြုသူ features တွေရှိပါတယ်။
ပထမဦးစွာ - မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edge မှ extensions တွေကိုတပ်ဆင်။ , install settings ကိုမီနူးသွားပါနှင့်သင့်လျော်သောမီနူးကို item ကို select ရန်။
အဲဒီနောကျ, သင်သည်သင်၏ installed extensions တွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်သို့မဟုတ်သစ်ကိုစတိုးဆိုင်၏ Windows 10 ကို installation ကိုသွားပါ။
ဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြေ - ထို Edge ကို browser မှာ tabs များကိုပြုပြင်တာတွေတစ် function ကိုရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦး tab ကို pin စေရန်, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကို click ထောက်ပြီး context menu ထဲကတပ်မက်လိုချင်သောအ option ကို click လုပ်ပါ။
အဆိုပါ tab ကို icon တစ်ခုအဖြစ်ပြသပါလိမ့်မည်အလိုအလျောက်သင် browser ကိုစတင်ပါအခါတိုင်း loaded လိမ့်မည်။
ငါသည်လည်း (ပထမစခရင်ပုံပေါ်မှတ်သား) "နယူးအင်္ဂါရပ်များနှင့်သိကောင်းစရာများ" ကိုရွေးချယ်ပါ, ထို setting များကို menu ကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြု: သင်ပစ္စည်းပေါ်တွင်နှိပ်ပါအခါသင်ကောင်းစွာကွပ်မျက်ခံရအပေါ် get နဲ့ Microsoft Edge browser ကိုအသုံးပြုအကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်၏တရားဝင်စာမျက်နှာကိုရှင်းလင်းပါလိမ့်မယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge စတင်ပြီးနောက်အလယ်တန်းအတွက်ရှာဖွေရေးအကွက်တွင် (သင် website တစ်ခုလိပ်စာရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှိရာ) ကို (ထို setting တွင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်) ကို default အားဖြင့် "ကျနော့် Channel ကို" ဖွင့်လှစ်။ သငျသညျစာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်မှာ "Configure" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလျှင်သင်၏အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြပေးခံရဖို့သငျသညျသတင်းခေါင်းစဉ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင့် browser အလွန်အနည်းငယ်ခလုတ်ရဲ့ထိပ်မှာ: နောက်ကျော, forward သမိုင်းအဘို့အစာမကျြနှာ refresh, စာညှပ်များ, downloads, ဖတ်-button ကိုများစာရင်းကိုလက်, "ဝေမျှမယ်" ခလုတ်ကိုနဲ့ settings တွေကိုအားဖြင့်ခလုတ်ကိုမှတ်စာများထည့်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်လိပ်စာများအပေါ်မည်သည့်စာမကျြနှာအကူးအပြောင်းအတွက်ပါဝင်ဘို့မှတ် "စာဖတ်ခြင်းအဘို့ mode ကို" ပေါ်လာအဖြစ်သင့်စာညှပ်ဖို့စာမျက်နှာထည့်ပါ။ ထို့အပြင် settings ကိုအတူဤအညီ, သင် home page ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အိုင်ကွန် "မူလစာမျက်နှာ" ခလုတ်ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
tabs များနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း - Chromium မီ-based browser များ (Google Chrome ကို, Yandex Browser ကိုများနှင့်အခြား) ၌ရှိသကဲ့သို့အတိအကျတူညီ။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, (ပုံမှန်အားဖြင့်က "အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ" ပြသ - သင်မကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုသောသူမြား) ကို "အပေါင်း" သင်အသစ်တစ်ခု tab ကိုဖွင့်နိုင်သည်ကို အသုံးပြု. အပြင်, သင်သည်ဤ tab ကိုကသီးခြားဘရောက်ဇာကိုပြတင်းပေါက်ဖြစ်လာမယ့်လမ်းဆွဲယူနိုင်ပါတယ် ။
အသစ်က browser ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ
နောက်မှတကယ်တော့အတွက်ချိန်ညှိကြောင်း, သဘောပေါက်ခဲ့တယ်ဒါမှမရရှိနိုင် settings ကိုမှလှည့်မဖြစ်မီ, အဓိကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ features တွေကို Microsoft က Edge ကြည့်ယူပါ။
ဖတ်နေ mode ကိုနှင့်စာဖတ်ခြင်းစာရင်း
နီးပါး Microsoft က Edge အတွက် mode ကိုဖတ်ရှုဖို့ထင်ရှား OS X ကိုအဘို့အဆာဖာရီထဲမှာရှိသကဲ့သို့တူညီ: သင်စာမျက်နှာဖွင့်သောအခါ, လိပ်စာခလုတ်ကို၏ညာဘက်စာအုပ်၏ပုံရိပ်နှင့်အတူပေါ်လာသော, အရာအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်, စာမကျြနှာကနေအားလုံးမလိုအပ်သော (ကြော်ငြာပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှား အညွှန်း, etc) ကတိုက်ရိုက် ဆက်စပ်. ရှိသည်သာစာသား, link များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုလည်းမရှိ။ အလွန်နေရာလေးကိုအရာ။
ဘတ်ရွတ် mode ကိုသက်ဝင်စေရန်သင့်အားလည်းကီးဘုတ်အတိုကောက်များကို Ctrl + Shift + R. ကိုသုံးနိုင်သည် တစ်ဦးကနှိပ်ပြီးရင် Ctrl + G ကိုသင်ယခင်ကအကြာတွင်ဖတ်ရှုဖို့ကဆက်ပြောသည်ပြီဖတ်ပါဝင်သောပစ္စည်းများစာရင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ပါ။
ဖတ်ဖို့စာရင်းထဲတွင်မဆိုစာမကျြနှာကိုထည့်သွင်းလိပ်စာဘား၏ညာဘက်ရန် "ကြယ်ပွင့်" ကိုနှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်စာမျက်နှာများကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုနှိပ်ပါအကြိုက်ဆုံး (bookmarks ကို), နှင့်ဤစာရင်းထဲတွင်မရှိကြပေ။ ဒီ feature လည်းအသုံးဝင်သည်, ဒါပေမယ့် Safari ကတချို့ပိုဆိုးအထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ - အင်တာနက်ကို Microsoft Edge အတွက်လက်လှမ်းမပါဘဲစာဖတ်ခြင်းစာရင်းထဲကဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုဖို့လို့မရပါဘူး။
အဆိုပါ browser မှာ "Share" button ကို
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge အတွက်သင်က default အားဖြင့်စတိုးဆိုင်က Windows 10 ကနေထောက်ခံ applications များတဦးသည် OneNote နဲ့ Mail ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့စာမျက်နှာကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ "Share" ခလုတ်, ထင်ရှားသော်လည်းသင်တရားဝင် Facebook မှာ app ကို, Odnoklassniki, Vkontakte install လုပ်ပါလျှင်, သူတို့ကလည်းစာရင်းတွင်ပါလိမ့်မည် ။
စတိုးဆိုင်များတွင်ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်ကိုထောက်ပံ့သော Applications ကိုအောက်ကပုံထဲက၌ရှိသကဲ့သို့, "Share" မှတ်သားနေကြသည်။
မှတ်စာများ (နယူးက Web-note ကို)
အဆိုပါ browser မှာတစျခုမှာလုံးဝအသစ်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာ - မှတ်စာများနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း - သင်နောက်ဆက်တွဲတစ်စုံတစ်ဦးကမှသို့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အပေးပို့ခြင်းမှကြည့်ရှုနေတိုက်ရိုက်စာမျက်နှာ၏ထိပ်ပေါ်မှာမှတ်စု၏ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ဖန်ဆင်းခြင်း။
Web ကိုသေတ္တာထဲတွင်ခဲတံနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်ဖန်ဆင်းခြင်း mode ကိုဖော်ပြသည်။
bookmarks, downloads,, သမိုင်း
ဒါဟာသစ်ကိုဖွင့်အတော်လေးသောအရာကိုမရမယ့်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲမကြာခဏစာတန်းထိုးအတွက်ညွှန်ပြနေကြသည်သောဘရောက်ဇာထဲမှာအမှုအရာကိုသုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်များသဘောပေါက်အကြောင်းကို။ သင်သည်သင်၏ bookmarks ကို, သမိုင်း (နှင့်၎င်း၏ကုသမှု), ဒေါင်းလုတ်ဆွဲသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းစာရင်းယူပါက, သုံးလိုင်းများနှင့်အတူခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျ, ဤဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သရှုမြင်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းရေး (သို့မဟုတ်စာရင်းထဲမှတစ်ခုခုပေါင်းထည့်နိုင်ပါသည်) ဘယ်မှာ panel ကိုဖွင့်လိုက်ပါအဖြစ်ကအခြား browser များထံမှစာညှပ်များကိုတင်သွင်းဖို့။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်အထက်ညာဘက်ထောင့်ရှိ pin ကို icon ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် panel ကို fix နိုင်ပါတယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge က Settings
အထက်လက်ယာသုံးစက်နှင့်အတူခလုတ်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းပြချက်မပါဘဲသောပစ္စည်းများအများဆုံး options နဲ့ settings တွေကိုတစ် menu ကိုဖွင့်လှစ်။ ငါပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဖြစ်သောနှစ်ခုသာသူတို့ထဲကကိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်:
နယူး InPrivate ပြတင်းပေါက် - Chrome မှာစစ်အစိုးရကို "ရုပ်ဖျက်" အလားတူသောဘရောက်ဇာကိုပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်။ ဒီ window တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ cache ကို, လာရောက်လည်ပတ်သူသမိုင်း, cookies များကိုဖိုင်တွေကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြ။
အိမ် screen ပေါ်မှာစွဲစေ - သင်ကခုန်ဖို့ကို Windows Start menu 10 အတွက် tile ကို site ကိုနေရာခွင့်ပြုပါတယ်။
ဘယ်မှာသင်သည်တတ်နိုင်ဒါဟာတူညီတဲ့ Menu ထဲမှာ "Settings" ကိုသည်:
ဆောင်ပုဒ် (အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်) ကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုအနှစ်သက်ဆုံးဘား (စာညှပ်များဘား) တို့ပါဝင်သည်။
"နဲ့ပွင့်လင်း" ၌တစ်ဦးကို browser ရဲ့ start စာမျက်နှာသတ်မှတ်မည်။ သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမျက်နှာသတ်မှတ်ချင်လျှင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ပစ္စည်း "တိကျတဲ့စာမျက်နှာများသို့မဟုတ်စာမျက်နှာ" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အလိုရှိသောပင်မစာမျက်နှာ၏လိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။
သင်အသစ် tab မှာပေါ်လာတဲ့ပြသပါလိမ့်မည်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည် "ဟုနှင့်အတူသစ်တစ်ခု tab ကိုဖွင့်ပါ" ၌။ "ထိပ်တန်းဆိုဒ်များ" - ဤအသင် (နေသမျှကာလပတ်လုံးဒီကလူကြိုက်များတဲ့ရုရှားက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပြသပါလိမ့်မည်, အလုံအလောက်စာရင်းဇယားရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကဲ့သို့) အများဆုံးမကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်ဆိုဒ်များဖြစ်ကြသည်။
Clear ကို cache ကို, သမိုင်း, browser ကိုဖိုင်တွေထဲမှာ cookies များကို ( "Clear ကို browser ကိုဒေတာ 'ကိုရွေးချယ်ပါ) ။
(နောက်ပိုင်းတွင်ကိုရေးသားပါမည်) mode ကိုဖတ်ရှုဖို့စာသားနဲ့စတိုင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
အပိုဆောင်း Microsoft က Edge setting တွင်သင်သည်တတ်နိုင်:
အိမ်စာမကျြနှာ button ကိုဖော်ပြရန်နှင့်ဤစာမျက်နှာ၏လိပ်စာသတ်မှတ်ရွေးချယ်ပါ။
Pop-up window ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း, Adobe Flash Player ကို, ကီးဘုတ်အညွှန်း Enable
ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်လိပ်စာဘားထဲကနေရှာဖွေတဲ့ search engine ကို add ( "နှင့်အတူရှာရန်လိပ်စာဘား 'ကိုရွေးချယ်ပါ) ။ အောက်တွင် - ဒီနေရာမှာ Google ကပေါင်းထည့်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
(စကားဝှက်တွေနဲ့ပုံစံဒေတာ, အ browser မှာ Cortana ၏အသုံးပြုမှု, Cookie ဖိုင်များ, ပု SmartScreen, စာမျက်နှာဝန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းကယ်ဖို့) privacy ကို options ကို Configure ။
ငါတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လျှို့ဝှက်မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge //windows.microsoft.com/ru-ru/windows-10/edge-privacy-faq အပေါ်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေတွေကိုနှင့်ကိုယ်ကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်အကြံပြုအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge အတွက် Google ကသင်၏ default အနေနဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အောင်လုပ်နည်း
ဘယ်အချိန်မှာသင်ပထမဦးဆုံးပစ်လွှတ် Microsoft က Edge, အဲဒီနောက် setting များကိုသို့သွားလေ၏ - ပိုပြီး options နဲ့ပြီးတော့အဲဒီမှာ (ကျနော် unpleasantly အံ့အားသင့်ခဲ့ပြီးသော) ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် Google ကရှာမလိမ့်မယ် "ဟုနှင့်အတူလိပ်စာဘားရှာရန်" အောက်မှာ search engine ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
, ပထမဦးစွာ google.com မှအပေါ် log ထို့နောက် settings ကိုအတူပြန်လုပ်နှင့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် Google ကရှာဖှေစာရင်းထဲတင်ပြပါမည်: သို့သော်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ကအရမ်းရိုးရှင်းဖြစ်ထွက်လှည့်။
ဒါဟာအစအသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်: အမိုက်ကရိုဆော့ဖ Edge အတွက် "အားလုံး tabs များပိတ်ပြီး" ဟုအဆိုပါမေးမြန်းမှုပြန်လာနည်း။
ဗီဒီယို Watch: Why You Need Microsoft Office 365! (အောက်တိုဘာလ 2019).